အပျိုစင်ဘဝ တန်ဖိုးထားပါ virgin | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အပျိုစင်ဘဝ တန်ဖိုးထားပါ virgin
အပျိုစင်ဘဝ တန်ဖိုးထားပါ virgin
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 26, 2012 in News | 39 comments
အပျိုစင်ဘဝ တန်ဖိုးထားကြ။ ဒီလိုပြောတာ သဂျီးပြစ်တင် ကြိမ်းမောင်းနေတဲ့ ကွန်ဆားဗေးတစ် ရှေးရိုးစွန်း အမြင်ရှိလို့ မဟုတ်ဘဲ တန်ရာတန်ကြေး ဈေးကောင်းရအောင်လို့ပါ။ အေဘီစီသတင်းမှာ ဒီလို ဖတ်ရတယ်။ အသက်နှစ်ဆယ်အရွယ် ဘရာဇီးပျိုဖြူ ကောလိပ်ကျောင်းသူ Catarina Migliorini ဟာ အင်တာနက်မှတဆင့် အပျိုစင်ဘဝကို ဒေါ်လာ ၇၈၀,၀၀၀နဲ့ ဂျပန်တဦးအား လေလံတင် ရောင်းချလိုက်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာကျော်သတင်း ဖြစ်စေလိုက်သည်။ ဂျပန်ဖောက်သည်ဂျီး Natsu သည် အမေရိကန်၊ ဩစတေးလျ၊ အိန္ဒိယ၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံတို့မှ လေလံပစ်သူများအား အကြိတ်အနယ် ကြိုးစားပမ်းစား အမျိုးဂုဏ်ဆောင်ရန် ဇာတိသွေး ဇာတိမာန် အပြည့်ဖြင့် (ဤကား ဘာသာပြန်ဆြာ ဦးကြောင်ကြီးအာဘော်၊ စကားချပ်) ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရသည်။ ကိုရွှေဂျပန်အဖို့ ဘရာဇီး ကျောင်းသူလေးနှင့် ချစ်ရည်လူးရန် တနာရီ အချိန်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်ကန့်ကွက်မှုများအား ရှောင်လွှဲရန် လေယဉ်ပေါ်တွင် တွေ့ဆုံကြမည်ဖြစ်သည်။ လေလံပွဲအား Justin Sisley ဆိုသူ ဩစတေးလျ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူမှ စီစဉ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ကားအဖြစ် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ ရရှိသောငွေ၏ ၉၀%အား သူမမွေးဖွားကြီးပြင်းရာ စန်တာ ကာတာရီးနားပြည်နယ်တွင် မရှိနွမ်းပါး ဆင်းရဲသား နေအိမ်များ ဆောက်လုပ်ရာတွင် လှူဒါန်းသွားရန်ရှိကြောင်း ဘရာဇီး အပျိုစင်လေးမှ ပြောကြားသည်။ ပွဲစီစဉ်သူ Sisley ကတော့ ဤပြောဆိုချက်အပေါ် သံသယရှိနေသည်။ ပွဲတလျောက်လုံး နားလည်ထားခဲ့တာ စီးပွားရေးသဘော သက်သက်ပါ၊ အခုတော့ ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာ ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်နေပြီမို့ ထောင်ချောက် ပိတ်မိနေပြီထင်တယ်။ ရောက်နေပြီထင်တယ်။ အကယ်၍ အလှူမဟုတ်ဘူးဆိုရင် လူတွေသူ့ကို ကဲ့ရဲ့တော့မှာပေါ့။ အသက်နှစ်ဆယ့်တနှစ်သား လပျိုဆင် Alexander Stepanov ဆိုသူလည်း မှတ်တမ်းတင် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့ ဒေါ်လာသုံးထောင်ဖြင့်သာ ဘရာဇီး အမျိုးသမီးတဦးထံ လပျိုရည်ဘဝ အပ်နှင်းရန် လေလံအောင်သည်။
မူရင်းလင့်ခ် ဖတ်ရန် ဤနေရာမှသွားပါ
အပျိုစင် လိုချင် အိုသခင် ပိုရှင်…
Natsu competed with bidders from the United States, Australia, India and Brazil. He’ll be allowed to spend one hour with the Brazilian student, and their encounter will take place onaplane flying over international waters in order to avoid any legal problems.
But Sisley told the Huffington Post that he was skeptical about Migliorini’s claim.
Twenty-one-year old virgin Alexander Stepanov is also participating in Sisley’s documentary. Stepanov only managed to fetch $3,000 during his auction, selling off his virginity toaBrazilian woman, identified as Nene B.
ဒေါ်လှ ခွန်နှစ်သိန်းရှစ်သောင်းဒဲ့ အမလေးလေး……
အဲဒီသတင်း ဖတ်ပြီးပြီ ဦးကြောင်
ကဲ ကဲ … ဘရာဇီးကျောင်းသူလေးအတွက် သာဓုခေါ်ပေးလိုက်ရအောင်
သာဓုပါတော် သာ.. ဓုပါ
ကျနော်ကြားတာ ဂျပန်ကြီးမဟုတ်ဘူး ဒဲ့
ကြောင်ကြီးပါတဲ့ အာရှဖွား အခုဥရောပရောက် ကြောင်ကြီးတစ်ဂေါင်ပါဒဲ့
ယောက်ျားလူပျိုစင်ဆိုရင် ဈေးမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ သဘောပေါ့နော် ..
ဒေါ်လှ ၃၀၀၀ ထဲဆိုတော့ …
ပြောင်းပြန်စဉ်းစားရင် ယောက်ျားလေးတွေကတော့ လူပျိုဘ၀ ထိန်းသိမ်းလဲ မထူးဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ …
90%လှူတာဘဲလေ….သူမပုံလေးတော့တွေ့ လိုက်တယ်….အားလုံးတော်တန်တိတ်၊ မွတ်စ်သဂျီးသမက် မာမူကြောင်ကြီး တင်တာထက်လှသေး….
လား ပေါင်းများစွာ တို့တော့မစဉ်းစားတတ်ပေါင် သေချာတာတော့
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံ ၊တာချီလိတ် နယ်ဘက်တွေမှာသမီးကညာ
အသက်(၁၀)နှစ်ကျော်လာရင် တာချီလိတ်သို့မဟုတ် တစ်ဘက်နိုင်ငံမှာ
စတဲ့ တဏှာရာဂကြီးပြီးလောကစည်းစိမ်ကိုငွေနဲ့ပေါက်ပြီးဝယ်ယူတဲ့ဒီလူ့ပြိတ္တာတွေ ဆီမှာသွားရောင်းလို့ရတဲ့ပိုက်ဆံဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ရွှေဆွဲကြိုး၊ဆိုင်ကယ်
သူတို့ရဲ့ရုပ်ရည် ငယ်ရွယ်မှုနဲ့ အဲဒီသူဌေးတွေစိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး
အဲဒီဘက်ကကျေးလက် society တွေဟာ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုရောင်းပြီးမိဘကိုလုပ်
ကျွေးတာဟာမွန်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိတာရယ် ခနတစ်ဖြုတ် သွားပြီးပြန်လာ
ရင်တိုက်အိမ်နဲ့ ရွှေနဲ့ နေနိုင်ပြီးအချိန်တိုတိုအတွင်းချမ်းသာနိုင်တာရယ်ကြောင့်
ွှအပျိုစင် ဟုတ်မဟုတ် ဘာစက်နဲ့ တိုင်းတာလဲ ကိုကြောင်ကြီး။
ခု အားလုံး ကို ပြန်ပြုပြင် လို့ ရနေတာ ဆို တော့ ( ကြားဖူးတာ ပါ seal ပြန်ပိတ် လို့ ရတယ် တဲ့ )
စီးပြန်ပိတ်လို့ရပေမယ့် လာရာလမ်းကြောင်းက ဒဏ်ရာတွေကတော့ ပြန်ဖျက်လို့မရဘူး
ကန်တော့ပွဲ တပွဲကပဲ တန်ဖိုးပိုများနေမလား ……
အိုက်ဒါ sex abuse နဲ့ညိဘာဒယ်။ အပျိုစင်လေးများကို လူကုန်ကူးချင်သူများအား လက်ယပ်ခေါ်သလိုဖစ်နေဘာဒယ်။ ဂလိုအွန်လိုင်းတက်ရောင်းတဲ့ကိတ်စ ကို ကန့်ကွက်ပါဒလယ်။
ဗမာ ပြည်က အမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေလို အိမ်ထဲမှာဘဲထိုင်နေပီး မိဘပေးစားတာ ကိုကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းယူသင့်ဘာဒယ်။ အပျိုစစ်လို့ ဈေးပိုရမလား ကြံတာမျိုးမဖစ်သင့်ပါဝူးးး။
ဦးကြောင် ရေ ။
ရွာသူားတွေ နားလည်မှု လွဲမှာစိုးလို့ တစ်ခုဝင်ပြောမယ်နော် ။
” အသက်နှစ်ဆယ့် တနှစ်အရွယ် အခြားအပျိုစင် Alexander Stepanov ဆိုသူလည်း —
ဒေါ်လာသုံးထောင်ဖြင့်သာ ဘရာဇီး အမျိုးသမီးတဦးထံ အပျိုစင်ဘဝ ရောင်းချရန် လေလံအောင်သည် ”
အဲဒီ Alexander Stepanov ဆိုတာ ယောက်ကျားလေးပါ ။
သူ့ရဲ့ လူပျိုစင် ဘဝ / လူပျိုရည် ကို လေလံပြစ်တာပါ ။
ဓါတ်ပုံ နှင့် လေလံဈေးပေးပုံတွေ ကြည့်ချင်ရင် ၊
အောက်က လင့် မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ် ။
အင်း အဘတို့ ယောက်ကျားလေးတွေများ မျက်နှာငယ်လိုက်တာ ။
လူပျိုစင် ဘဝတောင် ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ပဲရတယ် ။
ကြံဖန် ဂုဏ်ယူရမယ်ဆိုရင် အဲဒီ လေလံပွဲကို အဘတို့ သြဇီက စီစဉ်တာတဲ့ ။
အဲဒီတော့ ရွာသူားတွေထဲက ပါဝင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားသူများ ရှိခဲ့ရင် —
အဘ — ဟဲ ဟဲ ဟဲ ။
အမျိုးသမီးတွေ အပျိုစင်စစ်မစစ် သိနိုင်ပေမဲ့ အမျိုးသားများကျတော့ ဘယ်လိုစမ်းသပ်မှုနဲ့ များသိနိုင်မလဲ မသိဘူးနော်။
တော်ပါပြီ သိချင်ရင်ဖုန်းဆက်မေးလိုက်တော့ မပြောချင်တော့ဘူး
တရားသဘောနဲ့ ကြည့်ရင် ရုပ်နဲ့နာမ် ဒါဘဲရှိတာ… အလှူကတော့ အဖတ်တင်တာပေါ့… သာဓုပါတော်…
ပေးတဲ့လူနဲ့ယူတဲ့လူနဲ့လေလံအောင်တဲ့လူနဲ့ 
60 minute = 780000
1 second = 216.66
ဆိုတော့ကာ အော် … အချိန် … အချိန် … တော်တော်ကို တန်ဖိုးရှိတာပဲနှော် :-)
အနော်လည်း လူပျိုဘ၀ကို ကြမ်းချင်းဈေး ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ နဲ့ စချင်ပါတယ်
ရသမျှ ၀င်ငွေအားလုံးကို မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် အကုန်လုံးကို အသုံးပြုမှာပါ (ဤသည်ကား ဈေးကောင်းရရန် ဆွဲဆောင်ချက်) …… နောက်ပြီး Live ထုတ်လွှင့်ပြသမည် ဖြစ်ပြီး ထုတ်လွှင့်ခရရှိမည့်ငွေများအား မြန်မာပြည် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရော မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အဆင့်အတန်း တိုးတက်မြင့်ဖို့အတွက်ပါ အကုန်လုံး အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ် ….
စိတ်ပါဝင်စားသူများ သူဂျီးမင်းကတဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်သလို
မန်နေဂျာ ကပေ ထံတွင်လည်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
တော်ကြာမိန်းမတွေလေလံလာမဆွဲပဲ၊ ဘဲတွေပဲလေလံလာဆွဲကြလို့ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေအုန်းမယ် :-)
ဈေးနှုန်းတွေ ၊ ဒီပိုက်ဆံ ကို ဘယ်မှာသုံးမှာပါ တို့ဘာတို့ညာတို့အသာထားလို့ 
ကျုပ်တို့ နိုင်ငံမှာလဲ စားဖားတွေမှ အများကြီးရယ် ၊ ငယ်သေးပေမယ့် မွေးရပါ ပါရမီ + ပတ်ဝန်းကျင် လှုံ့ ဆော်မှုကြောင့်ရယ် ကြောင့် စားဖားငယ်ဖြစ်နေတာရယ် ၊ နောက်… လုပ်ရင်းကိုင်ရင်း ကျွမ်းကျင်အဆင့်ဝင်သွားတဲ့ စားဖားလတ်/ကြီး များကတော့
အဲဒီ $ ၇၈၀၀၀၀ ဆိုတဲ့ ဟာကို မြင်ကြရရင် ဘယ်လောက် နှမြောနေကြမလဲ ဆိုတာ ခန့် မှန်းမိတယ်ဗျာ
လူပျိုစင် ဘ၀လေးတွေ..အကြောင်း လည်း…ရေးပါဦး.ခည ။
Here you go. Current breaking news in Burma.
Burmese girl will win USD 3500 if she auctions her virginity toaChina man, then she must have sex with China man forayear and gives birth baby.
WhataBurmese Virgin
နိုင်ငံဂျားဂ လူဒွေ …
ကြံကြံဖန်ဖန် ထွင်ဂျဒဲ့ ..
(စိတ်ရူးပေါက်ရာ လျောက်လုပ်ဂျဒဲ့ ) … နေရာမှာ
နှစ်ယောက် မရှိဘူး …
အချို့ဆို ကမ္ဘာ့စံချိန် တင်ချင်ဒါနဲ့ဘဲ …
မဟုတ်တရုတ်ဒွေ လျောက်လုပ်၊ လျောက်ထွင်ဂျဒယ် …
ခုလည်း ဂလိုဘဲ …
မဟုတ်တရုတ် အိုင်ဒီယာ ထွက်လာဒုံး ကမ္ဘာကို လွှတ်ကြေညာလိုက်ဒါ …
ဒီသတင်းမျိုးဂ လူဒွေ အယမ်းအယမ်း ဆိတ်ဝင်စားဒဲ့ သတင်းဆိုဒေါ့ ..
အင်း … ပျံ့လွယ်တွားဒါဘော့ …
ဒါဂို မဟုတ်ဂျပန် က လေလံဝင်ဆွဲပီး အောင်တွားဒေါ့ …
(အင်း .. ဘာဘဲဖစ်ဖစ် အဲ့တစ်နာရီ မဟုတ်ဂျပန် နေရာမှာ ခဏလောက်တော့ အစား ဝင်မိဂျင်ဒယ် ..
ကျုပ်လည်း ပုထုဇဉ်ဂိုး ဂျ …. )
ပထမဆုံး.. ၁၀မိနစ်ဖယ်ပြီး.. နောက်၅မိနစ်စီကို.. ဒေါ်လာ ၂သောင်းနဲ့ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင်.. စိတ်ဝင်စားမှာလား ဟင်င်င်..
( မတူတဲ့အတွေးနဲ့.. )
ဒေါ်လာ ၂ သောင်းနဲ့ ဆိုရင် ..
အင်း .. တစ်ယောက် မက၊ နှစ်ယောက် မက ….
၅ မိနစ် မက၊ ၁၀ မိနစ် မက … မက .. မက ….
ကော်မန့်ပေးမလို့.. ဘေးကအတန်းကြည့်တော့.. အောက်ကအတိုင်း.. ပို့စ်ခေါင်းစဉ်တွေ စီပေါ်နေတယ်..
– မဟာရာဇာ အံစာတုံး
တန်ဖိုးရှိတာလိုချင်ရင် တန်ဖိုးရှိအောင်ထားပါ ……..
– myanmar oscar
– candle .
– YE YINT HLAING
အပျိုစင်ဘဝ တန်ဖိုးထားပါ virgin… တန်ဖိုးရှိတာလိုချင်ရင် တန်ဖိုးရှိအောင်ထားပါ …….. ယဉ်ကျေးမှုဟု ဆိုရာတွင်….. ကြုံဖူးသူမှ ယုံနိုင်မယ်-(ဇာတ်သိမ်း) တဲ့..
– Khaing Zar Win
သင့်ကို အလိုရှိသည်။..ဇရာ.. တဲ့..။
ဧကန္တတော့ ပထမဆုံး မန်းလေးဂေဇက်က အမိန့်ပြန်တမ်းအထုတ်ခံရမယ့်သူက ကိုပေါက်
ပြောင်းလဲမှု့၊ ရေစီးကြောင်း ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး………..
ကွန်မန့်တွေ အားပေးကြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ် နောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာ လပျိုဆင်ကို အပျိုစင်ဆိုပြီး မှားရေးမိပါတယ်။ အန်တီဝေနဲ့ ဦးဖော ထောက်ပြမှ သတိပြုမိပါသည်။ မနေ့က ဖောင်ပိတ်ခါနီး အယ်ချုပ်ဦးခိုင်က အမြန်တင်ပါဆိုလို လောလော လောလောနဲ့ တင်မိတာ ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျား။
သဂျီးသမက် ဖြစ်လို့ ဝင်လေလံစွဲမည် ထင်နေသူများ မှားသည်။ အဲလောက် ဦးကြောင်ကြီး မိုက်လုံးမကြီးပါ၊ လေလံငွေအပေါ်သာ အခွန်ကောက်မည်။ :harr:
ဒါကတော့ သစ်ထူးလွင်ဆိုက်မှာ ၂၄ရက်နေ့စွဲနဲ့ တင်ထားတဲ့ ကြေကွဲဖွယ် သတင်းလေးပါ။
ရောင်းစားခံရတဲ့ အသက် ၁၂ နှစ် ကလေးမ တာချီလိတ် ၉ ထပ်ဟော်တယ်၌သေဆုံး
ထိုင်း မြန်မာ နယ်စပ် တာချီလိတ် – မယ်ဆိုင်သို့ ရောင်းစား ခံရသည့် ကျိုင်းတုံ မြို့နယ်မှ အသက် မပြည့် သေးသည့် ၁၂ နှစ်အရွယ် ကလေး တယောက် တာချီလိတ် မယ်ခေါင်မြစ်ဟိုတယ် (၉ ထပ် ဟိုတယ်) ၌ ည သန်းခေါင်ခန့်က သေဆုံး သွားကြောင်း နီးစပ်သည့် အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောပါသည်။
ဒါပေမဲ့ ငါးကြော်မကြိုက်တဲ့ ကြောင်မိုက်တော့ မရှိပါဘူးနော်…….
ဘာတွေလဲတော့သိဘူး ! ဦးကြောင် ရေးသလို လိုက်ရေးကြည့်တာ။
အဘတို့ခေတ်တုန်းကဆိုရင် အပျိုစင်တစ်ယောက်နဲ့ နီးစပ်ခွင့်ရဖို့က
ဘာတဲ့ ဒေါ်လှ ဟုတ်လား။ ဒေါ်လှ ရှိတယ်ဆိုရင် လေလံစွဲးလို့ရတယ်ဆိုလား
ဘာဆိုလား။ သြော် ဒေါ်လှ ဒေါ်လှ ခင်ဗျားကြီးက တော်တော်ဘောင်ဝင်နေပါရော့လား။
ကျုပ်မှာ စစ်တာဆိုလို့ အဲ့ဒါဘဲရှိဒယ်